उदाहरणीय जोडी ! श्रीमान भन्दा २० बर्ष कान्छी श्रीमती - Sidha News
उदाहरणीय जोडी ! श्रीमान भन्दा २० बर्ष कान्छी श्रीमती
काठमाडौं। पूर्व व्रिटिस आर्मी पर्शु राई र सञ्चारकर्मी सिर्जना निंलेकुको जोडीलाई उदाहरणीय प्रेम जोडी भन्दा अत्याुक्ती नहोला । आफ्नो प्रेमको जोडी समान उमेरको होस् भन्ने धेरैको चाहना हुन्छ ।
सिर्जनाका दाईको नाता पर्नेले दुई जनाबीच परिचय बनाइदिएका थिए । विस्तारै उनीहरुबीच सम्बन्ध अघि बढ्दै गएपछि पर्शु सिर्जना प्रति आकर्षित हुँदै गए । सिर्जनाको यो दोस्रो विवाह हो । पर्शुसंग भेट हुँदा सिर्जनाको पहिलो विवाहवाट सम्बन्ध वि च्छेद भइसकेको थियो ।
पर्शु निकै कम बोल्छन् । अन्तरवार्ताका क्रममा पनि उनी निकै कम बोलेका छन् । जब पर्शुले सिर्जनालाई देखे उनको शिलस्वभाव र कृयाशिलता देखेर भुतुक्कै भएको बताए ।